သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ရန်နည်းဗျူဟာများကိုပေါင်းစပ်ခြင်း | Martech Zone
ပလက်ဖောင်းစတင်ချိန် မှစ၍ အီးမေးလ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ “ အီလက်ထရောနစ်မေးလ်” သည်စာတိုက်မှတစ်ဆင့်ပုံစံနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတခါတရံထင်ဟပ်စေသည့်နေရာတွင်ပလက်ဖောင်း၏ဘက်စုံသုံးမှုသည်သတင်းစကားတစ်ခုစီသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊
ယခုနှစ်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်အီးမေးလ်နည်းပညာများနှင့်နည်းပရိယာယ်များကိုသီးခြားကိရိယာများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်သမားတွေဟာသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်ချဉ်းကပ်မှုတွေနဲ့ဖန်တီးမှု၊ ဒီနေရာတွင်သင်အကျွမ်းတဝင်ရှိနိုင်မည့်နည်းဗျူဟာအနည်းငယ်ရှိပြီးပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ပေါင်းစပ်ရမည်နည်း။
အတူတူလက်ထပ်လိုက်တဲ့အခါအကြီးစားပေါင်းစည်းမှုနဲ့တက်ကြွတဲ့ပါဝင်မှုပြသမှုတွေဟာစွမ်းအားပြည့်စုံတဲ့စုံတွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားသောပေါင်းစည်းမှုနှင့်တက်ကြွသောပါဝင်မှုပြသမှုကို အသုံးပြု၍ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်တစ်မူထူးသောသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပုံပါ။
Mega ပေါင်းစည်း - ကြီးမားသောပေါင်းစည်းမှုကို အသုံးပြု၍ စျေးကွက်သမားများသည်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်တွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ စားသုံးသူရဲ့အမည်ကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိတာကအီးမေးလ်ကပိုအောင်မြင်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ “ ချစ်ခင်ရသော [အမည်]” သည်မလုံလောက်တော့ပါ။ အကြီးစားပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်အီးမေးလ်ကိုအလိုအလျောက်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးရန်အမည်များ၊ တည်နေရာသို့မဟုတ်အခြားလူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ စာဖတ်သူ၏အမည် (သို့) အခြားပေါင်းစည်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖတ်ရှု။ သင်လိုချင်သည့်နေရာကိုဖတ်ရှုသူ၏မျက်လုံးကိုညွှန်ကြားခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးမှာဤအရာသည်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။
dynamic အကြောင်းအရာပြသမှု - merရာမပေါင်းစည်းမှုမှရရှိသောစားသုံးသူဒေတာများအားလုံးကိုအီးမေးလ်တွင် ၀ ယ်လိုအားဖြင့်ပေါင်းစည်းပြီးထူးခြားသောအီးမေးလ်သုံးစွဲသူများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ နာမတော်၏အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း, input အပေါ်အခြေခံပြီးပြောင်းလဲနေသောအကြောင်းအရာအပြောင်းအလဲများကို။ အအောင်မြင်ဆုံးပြောင်းလဲနေသောပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ဆလိုက်များသည်ပေါင်းစည်းထားသောအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းထားသည်
ဥပမာအားဖြင့်aည့်ဝတ်ကျေပွန်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင်မကြာသေးမီကဖြစ်သည် ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်တစ်နှစ်တာ အီးမေးလ်ဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်ဆုရှင်ပိုင်ရှင်၏အမည်များ၊ ဟိုတယ်မည်မျှရှိသည်နှင့်တည်နေရာ - တိကျသောဆုလာဘ်ကိုင်ဆောင်သူများတည်းခိုခဲ့သည့်နေထိုင်မှုသမိုင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အကြံပြုထားသောဟိုတယ်များနှင့်တည်နေရာများနှင့်အတူဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ အကြီးစားပေါင်းစည်းထားသောအကြောင်းအရာများသည်အီးမေးလ်လိပ်စာအပေါ် အခြေခံ၍ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထို့ကြောင့်လူနှစ် ဦး သည်တူညီသောအီးမေးလ်ကိုမရရှိနိုင်ကြပါ။ ဆုရရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အညီထူးခြားသောဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရရှိထားကြသည်။
ပေါင်းစပ်သည်အခြားသော့ချက် features တွေ
စမတ်အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ကြီးမားသောပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်တက်ကြွသောပါဝင်မှုများ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့်အတူအဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ပါ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ရိုးရာနည်းဗျူဟာများကိုနည်းပညာအသစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
မိုဘိုင်းအရွယ်မှာဟိုက်ဘရစ်အပြင်အဆင် - အထိရောက်ဆုံးသောအီးမေးလ်များကစားသုံးသူတစ် ဦး သည်အီးမေးလ်ဖွင့်သည့်နေရာ (ဖုန်း၊ Desktop စသဖြင့်) နှင့် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားသောကလစ် - ဖွင့်နှုန်းရှိသည့်နေရာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်တုန့်ပြန်သောဒီဇိုင်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ စျေးကွက်သမားများက၎င်းနှင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်နိုင်သည် မိုဘိုင်းအရွယ်မှာဟိုက်ဘရစ် layout ကို ၎င်းသည်ကြီးမားပြီးသေးငယ်သည့်မျက်နှာပြင်များအတွက် layout တစ်ခုပေးသည်။ အပြင်အဆင်နဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်းဆုံးအပိုင်းလား။ ၎င်းသည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဖတ်ရှုနိုင်သောကြောင့်ချုံ့ချဲ့ရန်အသုံးပြုသူများကိုမလိုအပ်ပါ။ အမှန်ကတော့, ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ပြုတုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုရေးကောက်နှုတ်ချက်များ - ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ပေါင်းစည်းလိုက်သောအခါအီးမေးလ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်းပိုမိုအားကောင်းသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်၎င်းတို့၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည် လူမှုရေးကောက်နှုတ်ချက် - အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျထဲဆွဲတင်လိုက်သောလူမှုရေးအကြောင်းအရာများ (တွစ်တာများ၊ ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များကဲ့သို့) ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်သုံးစွဲသူများ၏တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီနောက်ဆုံးသတင်းများကိုပေးသည်။ အီးမေးလ်ပရိသတ်နှင့်ထိတွေ့ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လူမှုရေးကောက်နှုတ်ချက်များကိုအီးမေးလ်တစ်ခုအတွင်းထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် ၀ ယ်ယူသူများကိုအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုမျှဝေရန်အားပေးနိုင်သည်။
ပုံရိပ်တွေကိုချွတ်နှင့်အတူဖတ်ရှု 100 ရာခိုင်နှုန်း - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Google တွေ့ရှိခဲ့သည် ပုံပိတ်ဆို့ခြင်းသည်အီးမေးလ်များ၏ ၄၃ ရာနှုန်းစားသုံးသူများနှင့်လျင်မြန်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့်အီးမေးလ်၏အသွင်အပြင်ကိုမှေးမှိန်ရန်စျေးကွက်သမားများကိုစိန်ခေါ်သည်။ သို့သော်ရုပ်ပုံများနှင့်အကြောင်းအရာများကိုနည်းပညာအသစ်များဖြင့်ထည့်သွင်းခြင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်းတို့၏စားသုံးသူများနှင့်အီးမေးလ်ဆက်တင်များမည်သို့ပင်ရှိနေစေကာမူဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။
ပုံများကိုပိတ်ထားသည့် ၁၀၀ ရာနှုန်းပုံရိပ်များသည်စာသားအားလုံးကိုပြသခြင်း၊ ဖတ်နိုင်ခြင်း၊ ရုပ်ပုံများကိုတင်သည်ဖြစ်စေမသည်ဖြစ်စေအမှတ်တံဆိပ်များကသူတို့၏အီးမေးလ်များကိုအထင်ကြီးစေပြီးမက်ဆေ့ခ်ျကိုထိရောက်စွာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
စေးကပ်သောအကြောင်းအရာ - အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနှင့်အီးမေးလ်များရောင်းဝယ်ခြင်းသည်ဝင်ငွေတိုးပွားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်စေးကပ်သောအကြောင်းအရာနှင့်တွဲဖက်ပါကပိုမိုအားကောင်းလိမ့်မည်။ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကိုအခြေခံသည့်စာတိုပေးပို့သူကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းမဟုတ်ဘဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာတိုပေးပို့မှုများ (ဉာဏ်စမ်းပဟေ,ိများ၊ အကြံပြုချက်များစသဖြင့်) ပေးသည်။ ဒီအမျိုးအစားအမျိုးအစား တိုးပွားလာသောအီးမေးလ်ကို ၁၂-၂၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖွင့်သည်.
သုံးစွဲသူများသည် ၀ ယ်ယူရန်အမြဲအဆင်သင့်မဖြစ်သေးသဖြင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအီးမေးလ်များကိုမရှာဖွေပါ။ စားသုံးသူများ၏ဘဝသက်တမ်းကို အခြေခံ၍ အီးမေးလ်များကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်သမားများသည်၎င်းတို့သည်ထပ်မံ ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်မှီတိကျစွာသတ်မှတ်ထားသောအပိုင်းများကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
အီးမေးလ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းများကဲ့သို့သောရလဒ်များကိုတင်ပြသင့်သည်။ နည်းပညာများနှင့်နည်းဗျူဟာများကိုပေါင်းစပ်။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်သူတို့၏စျေးကွက်ရည်မှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်ရန်ထိတွေ့ဆက်ဆံသည့်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုပိုမိုထိရောက်စွာပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်သောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုတွေ့ရန်ယခုနှစ်ကုန်ပစ္စည်းကိုစစ်ဆေးပါ Yesmail မှအီးမေးလ်ဒီဇိုင်း lookbook.
Tags: ပြောင်းလဲနေသောအကြောင်းအရာအီးမေးလ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအီးမေးလ်ပုံအယ်လ် tags များအီးမေးလ်ပုံရိပ်တွေအီးမေးလ်စျေးကွက်လူမှုရေးအီးမေးလ်စပ်ပုံစံပုံပိတ်ဆို့ခြင်းအကြီးစားမိုဘိုင်းအီးမေးလ်အပြင်အဆင်မိုဘိုင်းအပြင်အဆင်ပွင့်လင်းမှုနှုန်းအရွယ်မှာအီးမေးလ် layout ကိုလူမှုရေးကောက်နှုတ်ချက်စေးကပ်သောအကြောင်းအရာဟုတ်ကဲ့